Yuusuf Garaad, wasiirkii arimaha dibadda ee xilka laga qaaday muxuu ka yiri go’aanka xilkaqaadista? – Radio Daljir
Yuusuf Garaad, wasiirkii arimaha dibadda ee xilka laga qaaday muxuu ka yiri go’aanka xilkaqaadista?
Janaayo 4, 2018 7:32 b 0
Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arimaha dibadda ee xilka laga qaaday ayaa ka hadlay go’aanka xilka looga qaaday iyo sida uu u arko.
Bar uu ku leeyahay Internetka ayuu soo dhigay qoraal, dheer, isagoona sheegay inuu ku qancay xilka qaadista, balse uu tallooyin siinayo madaxwaynaha iyo raysal wasaaraha.
Ciidamada Israil oo toogasho ku dilay Falastiinigii u horeeyey sanadkan 2018